ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ပေါင်းကူး ဆက်ဆံရေး (ပြင်ပဆက်ဆံရေး ဟူ၍လည်းသုံးနှုန်း)သည် တဦးချင်း သို့မဟုတ် [[အဖွဲ့အစည်း]] (စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရအေဂျင်စီ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်း) နှင့် ပြင်ပ (လူထု) အကြားတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေမှုအား စီမံခန့်ခွဲရသည့် အလေ့အထ ဖြစ်သည်။ ပေါင်းကူး ဆက်ဆံရေးတွင် တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့လိုက်မှ ၎င်းတို့၏ ပရိသတ်များ (ဖောက်သည်၊ စားသုံးသူ၊ ထောက်ခံသူစသည်)အား တိုက်ရိုက်ပေးချေစရာမလိုသော အများ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် သတိထားမိလာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြော်ငြာမှဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး ပုံစံ တစ်ခုအဖြစ် ခွဲခြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Public relations ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေးသည် ကြော်ငြာနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးထက် ဖောက်သည်များအတွက် အခမဲ့ဖြစ်စေရန် ခြုံငုံ ဖန်တီးထားသော စိတ်ကူးစိတ်သန်း ဖြစ်သည်။ ပေါင်းကူး ဆက်ဆံရေးအတွက် ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာ ဖောက်သည်များအတွက် ဆောင်းပါးဘေးတွင် ကြော်ငြာခပေး၍ ကြော်ငြာခြင်းထက် ဖောက်သည်များ အကြောင်း ဆောင်းပါး ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါင်းကူး ဆက်ဆံရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် လူထု၊ ဖောက်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည့်သူများ၊ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် အခြားသော ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသည့် သူများမှ အဖွဲ့အစည်း ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်း၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အပေါ်တွင် အပေါင်းလက္ခဏာဆန်သော သို့မဟုတ် ကောင်းသော အမြင်များ အား ထိန်းသိမ်းရန် အစွမ်းကုန် စွဲဆောင်မှု ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် PR နှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး နှင့် ကုမ္ပဏီ၊ အစိုးရ နှင့် ပြည်သူ့ရုံးများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အ ဖွဲ့စည်းများအတွက် လူထုသတင်းအချက်အလက် ပြန်ကြားရေးအရာရှိများ အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ပေါင်းကူး ဆက်ဆံရေးအလုပ်များတွင် ဖောက်သည်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး (account coordinator)၊ ဖောက်သည်ဆိုင်ရာအမှုဆောင် (account executive)၊ဖောက်သည်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးမှူး (account supervisor) နှင့် မီဒီယာဆက်ဆံရေး မန်နေဂျာတို့ ပါဝင်သည်။r.
ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူများသည် အဖွဲ့အစည်း၏ ပစ်မှတ်ထားရာ ပရိသတ် ၊ မီဒီယာ၊ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်နေသော စာနယ်ဇင်းများ နှင့် အခြားသော ဩဇာလွှမ်းမိုးသည့် ခေါင်းဆောင်များ နှင့် ဆက်ဆံရေး ထိန်းသိမ်း ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထွေထွေ တာဝန်များတွင် ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး ကန်ပိန်းအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ ရေးသားခြင်း နှင့် သတင်းရေးသားခြင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းခြင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ကုမ္ပဏီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအတွက် အင်တာဗျူးစီစဉ်ပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ခေါင်းဆောင်များအတွက် မိန်းခွန်းရေးပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် ပြုမူခြင်း၊ဖောက်သည်များအတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ မီဒီယာ အင်တာဗျူးနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာအတွက် ရေးသားပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းကျော်ဇောမှုအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း (ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး)၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် နှင့် ပြပွဲများကဲ့သို့သော မာကတ်တင်း (ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး) လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ အောင်မြင်သော ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေးသမားသည် ကုမ္ပဏီ အကျိုးစီးပွားနှင့် သက်ဆိုင်နေသူတိုင်း၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေမှုများကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူများသည် ပြင်ပဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်မည့် နည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရမည်ကို သိရှိထားရမည် ဖြစ်သည်။ 
↑ Career Overview: Public Relations - Wetfeet.com။ 29 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-09-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rubel၊ Gina F. (2007)၊ Everyday Public Relations for Lawyers (1st ed.)၊ Doylestown, PA၊ ISBN 978-0-9801719-0-7 More than one of |ISBN= နှင့် |isbn= specified (အကူအညီ)More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး&oldid=623959" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၈:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၈:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။